Downloads 20 504
Waxay abuureen 06-07-2009
Download Wixii FSX SP2 & FSX-Steam# Caymiska FSX iyo / ama P3D # 3D Cockpit Virtual
Waa 100% hooyo FSX-SP2 FSND Boeing 727-200, la dhamaystiran, qol dalwaddii firfircoon. Anshaxa ee horyaalka macquul ah tijaabiyey by duuliye dhabta ah. aaladaha ayaa loo dhexdiisa si sax hawlgallada macquul ah.
4 waxaa inlcusive samatabbexeen, Barbatov Airlines, Viasa, Waqooyi Galbeed, Lufthansa
Ku dar-on tayo aad u wanaagsan!
Waad ku mahadsan tahay in Alejandro Rojas Lucena uu jeeg fasax nooc baxay goobta http://www.simviation.com/fsnd/
Boeing 727 waxa uu ahaa, muddo dheer, diyaaradaha dunida ee ugu caansan. 727 ayaa u duulay markii ugu horeysay ee 1963. design ee 727 ahaa natiijada tanaasul u dhexeeya United Airlines, American Airlines iyo Eastern Airlines badan qaabeynta ah bedelka Boeing 707. United Airlines doonayay afar engine duulimaadyada in garoomada diyaaradaha ee sarreeya sare, gaar ahaan boosteejo ay khariidaynta Airport International Stapleton. American Airlines doonayay diyaarad mataanaha-engine sababo hufnaan ah. Eastern Airlines ayaa rajeynayay for engine seddexaad ka duulimaad ay ku Caribbean. Ugu dambeyntii, saddexda diyaaradaha heshiiyeen Tri ah, oo sidaas ku dhashay 727 ah.
727 waxa uu ahaa guul weyn oo dhan diyaaradaha ee awooda in ay dhul on runways gaaban mahad adduunka, halka adeega masaafo dhexdhexaad ah. Tani waxay ogol yahay in uu soo jiito shirkadaha diyaaradaha rakaabka ka magaalooyinkii isugu leeyihiin madaarada laakiin ka yar xagga meelaha dalxiiska ee caalamiga ah.
Mid ka mid ah feature in siiyey 727 ah awoodda ay leedahay in dhul on runways gaaban ahaa design gaarka ah ee Garbihiisa. By kordhin ciidamo of qaybood oo ka danbeysa geesaha, 727 ku dhowaad labanlaabmi karto dusha dhalista ay, taas oo loo ogol yahay isaga inuu u duulo la xasilooni weyn xawaare aad u hooseeya Source Wikipedia
FSND Boeing 727-200 for FSX-SP2 Download